Lwepolitiki Concentrator, Electroplated nesimbo Dryer, uBlade Dryer - Yanjialong
series DW eyodwa ezikroziswayo ibhanti isomisi
ukusebenza Single amdaka evaporator
ukusebenza amdaka evaporator ukusetyenziswa Single: Ezi zixhobo efanelekileyo zamayeza, bemvelo, ukutya, amashishini imichiza kunye nezinye, kwaye isoloko isetyenziselwa komphunga izicatshulwa emveli ase amayeza, incindi yeziqhamo, izisombululo emihle yamachiza, njl Amanqaku: a. isakhiwo compact kunye kwindawo floor encinane. Precision ipolishi ngaphakathi nangaphandle izixhobo, ngokuhambelana neemfuno GMP. b. Ezi zixhobo kakhulu sakhiwa imbawula, ukuba umahluli, a defoamer, i ekondensa kunye like. c ....
YZGFZG series ezincamathelayo isomisi
YZG / FZG series ezincamathelayo isomisi Intshayelelo: The ekuthiwa ezincamathelayo yokomisa ukuba yome umbandela phantsi kweemeko lwepolitiki, kwaye ukuba nempompo ezincamathelayo isetyenziswa ngokumpompa dehumidifying, umlinganiselo yokomisa kwandiswa. Qaphela: Ukuba kusetyenziswa ekondensa, isinyibilikisi kwi eziphathekayo kuxhuzulwa liSebe ekondensa; ukuba kusetyenziswa impompo ezincamathelayo ring SK amanzi series, lo ekondensa olunokutyeshelwa, ukonga utyalo-eneji. lencazelo: YZG / FZG series ezincamathelayo wokomisa bobabo ndawonye cleaner yomile. Le dr ...
Cleaner decompression concentrator
Ezincamathelayo decompression concentrator Okokuqala, imihlaba sesicelo Le izixhobo ngokufanelekileyo lwee- lulwelo imithi, ukutya, iikhemikhali kunye namanye amashishini, kwaye zingasetyenziswa recovery utywala nezokukhupha reflux elula. Amalungu e zoqhagamshelwano ngezixhobo ezenziwe insimbi, eye nokumelana kakuhle, kwaye uyakufezekisa imigangatho GMP. Okwesibini, ubume nezixhobo zokusebenza kakhulu sakhiwa umzimba omkhulu itanki yoxinaniso, umphunga-engamanzi ...
Double ukusebenza concentrator
Double ukusebenza concentrator Okokuqala, imihlaba sesicelo Le concentrator ilungele ukuba xi ulwelo ezifana amayeza emveli ase-China, amayeza asentshona, iswekile, starch, iMonosodium glutamate, iimveliso zobisi, amachiza, njl, kwaye Isiza iqondo lobushushu eliphantsi cleaner yoxinaniso ubushushu izinto ezibuthathaka. Emva yokubala ngenyameko kunye noyilo ngenyameko, inkampani yethu ngaphezulu kwe iimpawu yokuqala. Okwesibini, ubume nezixhobo kabini-ukusebenza ...
-Effect Three concentrator
Three-effect concentrator Okokuqala, imihlaba sesicelo Le concentrator ilungele ukuba xi ulwelo ezifana amayeza emveli ase-China, amayeza asentshona, iswekile, starch, iMonosodium glutamate, iimveliso zobisi, amachiza, njl, kwaye Isiza iqondo lobushushu cleaner eliphantsi yoxinaniso ubushushu izinto ezibuthathaka. Emva yokubala ngenyameko kunye noyilo ngenyameko, inkampani yethu ngaphezulu kwe iimpawu yokuqala. Okwesibini, ubume izixhobo I-isiphumo ezintathu c ...
concentrator Spherical Okokuqala, imihlaba sesicelo Le izixhobo ngokufanelekileyo lwee- lulwelo imithi, ukutya, iikhemikhali kunye namanye amashishini, kwaye zingasetyenziswa recovery utywala nezokukhupha reflux elula. Amalungu e zoqhagamshelwano ngezixhobo ezenziwe insimbi, eye nokumelana kakuhle, kwaye uyakufezekisa imigangatho GMP. Okwesibini, ubume nezixhobo zokusebenza kakhulu sakhiwa umzimba omkhulu itanki ingqondo, omnye umahluli umphunga-elulwelo, ...
Ikhoyili cleaner concentrator
Coil lwepolitiki concentrator Okokuqala, imihlaba sesicelo Le fowuni ilungiselelwe ngokufanelekileyo xi izinto ezingamanzi ezifana amayeza emveli ase-China, amayeza asentshona, ukutya, iMonosodium glutamate, imveliso zobisi, iswekile, starch, iziselo, iikhemikhali kunye nezinto ezinjengezo. Okwesibini, ubume izixhobo Le fowuni sisixhobo lokutywina zezindlu kunye ibhatyi yokugquma thermal, apho vacuumed nge alula kunye ejector kakuhle kubunzulu baphantsi. Ezi zixhobo uwahlule ube zahlulo zithathu, loo chambe ngumphunga ...
Alcohol alulame concentrator
Utywala concentrator ekuphulukenwe Okokuqala, imihlaba sesicelo Ezi zixhobo efanelekileyo zamayeza, bemvelo, ukutya, iikhemikhali kunye namanye amashishini. Idla isetyenziselwa komphunga zemveli izicatshulwa amayeza Chinese, izisombululo ecikizekileyo, imichiza, njalo njalo Isiza ukuba abe ngumphunga kunye nokufunyanwa organic izinyibilikisi. Okwesibini, ubume nezixhobo zokusebenza kakhulu sakhiwa imbawula, i evaporator, a defoamer, a ekondensa kabini, ukuba kupholile, a na ukwamkelwa engamanzi ta ...
Ukusebenza komgaqo wesiphumo sesithathu somphunga wamanzi amdaka anetyuwa eninzi
Isiphumo sesithathu ngumphunga luhlobo lokutsala kunye nezixhobo zoxinaniso, ezisetyenziswa kakhulu kwinkqubo yokunyuka komphunga kunye nokuxinana kwezinto ezingamanzi ezinje ngamayeza, amachiza, ukutya, kunye nomzi mveliso wokukhanya. Ixesha lokufudumeza ngokwasemzimbeni lifutshane, isantya sonyuko ngumphunga, t ...
Isilinda seoksijini kunye nentengiso ye concentrator iyakubona ukukhula okuphezulu emhlabeni ngo-2019-2025
Ithemba lemakethi leesilinda zeoksijini kunye nezimililitha, uhlalutyo olubanzi kunye nezahlulo eziphambili zentengiso kunye noqikelelo, 2019-2025. Iisilinda zeoksijini kunye neengxelo zemakethi zokugxila zingumthombo obalulekileyo wedatha kubacwangcisi bezoqoqosho. Inika uhlalutyo lokukhula kweemarike kwishishini ngaphezulu ...
Uhlalutyo kunye nokuthelekisa izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zokuwa kwe-evaporators
Ukuwa kwefilimu evaporator luhlobo lwezixhobo zokusebenza ezonyukayo ezisebenza kakuhle, ekuthiwa ngokudibeneyo kubizwa ngokuba yi-evaporator yefilimu encinci kunye nokunyuka kwe-evaporator yefilimu kunye ne-evaporator yefilimu. I-evaporators yefilimu encinci inezibonelelo ezibonakalayo kwaye isetyenziswa kakhulu kwimichiza, kumzi mveliso olula kunye ne-foo ...
Umgaqo wokujikeleza okunyanzeliswa komphunga
Ukujikeleza okunyanzelweyo ngumphunga ngumphunga oxhomekeke kumandla angaphandle ajikeleze. Ukuhanjiswa okunyanzelweyo kukusuka komphunga kulungele ngakumbi ukunyuka komphunga kobuninzi bamanzi, ukungcola, uxinzelelo oluphezulu, i-viscosity ephezulu, kunye namanzi amdaka kunye nencindi engamanzi eqinisisiweyo. ukugxila. ...
Ubukho kunye nomsebenzi we-MVR evaporator
I-MVR evaporator luhlobo olutsha olusebenzayo kunye nezixhobo zokonga umbane ezisetyenziswa kakhulu kushishino lwamayeza. Izixhobo zisebenzisa ubuchwephesha obushushu obusezantsi kunye noxinzelelo olusezantsi lobuchwephesha kunye namandla acocekileyo ukuvelisa umphunga njengamandla okwahlula amanzi phakathi. Kuku ...
© Copyright - 2010-2022: Onke amalungelo agciniwe. Kufakwe Iimveliso - Hot Tags - Sitemap.xml - AMP Mobile
Effect Single Umshini Concentrator, Layer Single nylon Belt Dryer, Double Effect Concentrator , Single Effect Concentrator ,
Idolophu yaseNihe Zhenglu, i-ChangzhouCity, JiangsuProvince